Kooxda Man City oo dalab qaali ah ka gudbinaysa Bruno Fernandes si ay saxiixiisa ugu garaacdo Man United – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Kooxda Man City oo dalab qaali ah ka gudbinaysa Bruno Fernandes si ay saxiixiisa ugu garaacdo Man United
By Abdihakim Sharif Ali / January 20, 2020 January 21, 2020
Manchester(SONNA)-Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa doonaysa inay kaga adkaato naadiga ay coltamaan ee Manchester United saxiixa Bruno Fernandes, iyadoo war maanta soo baxay uu sheegayo inay laacibkan Sky Blue ka gudbinayso dalab qaali ah oo ku kacaya 100 milyan oo euro.
Manchester United ayaa la sheegayaa inay wajahayso tartan adag oo kaga imaanaya kooxda Manchester City taasoo sidoo kale doonaysa saxiixa Bruno Fernandes, iyadoo kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ay sidoo kale xiiseynayso saxiixa laacibka khadka dhexe ee reer Portugal.
Red Devils kooxda lagu naynaaso ayaa muddo raadinaysay 25-sano jirkaan, iyadoo marka hore ka fiirsanaysay inay u dhaqaaqdo xagaagii la soo dhaafay, laakiin heshiis ay uga soo qaadanaysay Sporting ayaa noqday mid aan dhaqan galin.
Xiisahooda ayaa markale dib u soo laabtay bishaan, laakiin waxa ay markale ku dhibtoonayaan inay heshiis la gaaraan kooxda Lisbon, kuwasoo xiddigooda ku qiimeystay dhawaad 68 milyan oo gini.
Man United ayaa haatan laga soo diiday dalab lagu qiyaasayo 50 milyan oo gini, laakiin waxa ay Sporting dhiiri-gelin kale ka haleysaa Manchester City oo xiiseynaysa xiddigooda, waxaana ay ku farxi karaan in Sky Blue ay diyaar la tahay lacagaha ay dalbanayaan.
Majaladda Waddanka Portugal ka soo baxda ee Correio de Manha ayaa warinaysa in Man City ay diyaar u tahay inay Fernandes ka gudbiso dalab ku kacaya adduun dhan 100 milyan oo euro oo u dhiganta 86 milyan oo gini, inkastoo ay isku dayi doonaan inay sidaas sameeyaan dhammaadka xilli ciyaareedka.
Sporting ayaa ku farxi lahayd inay ceshato xiddigan khadka dhexe illaa dhammaadka xilli ciyaareedka, kaddibna ay ku hesho lacag aad uga badan tan Man United ay diyaarka la tahay.